Maraykanka Oo Wer-wer Ka Muujiyay Xarun Maamulka Puntland Si Qarsoodi Ah Ciidamo Si Weyn U Hubaysan Ugu Tababarayo Oo Lala Xidhiidhiyay Dawlado Shisheeye | Araweelo News Network (Archive) -
Maraykanka Oo Wer-wer Ka Muujiyay Xarun Maamulka Puntland Si Qarsoodi Ah Ciidamo Si Weyn U Hubaysan Ugu Tababarayo Oo Lala Xidhiidhiyay Dawlado Shisheeye
Washington(ANN) Dawlada Maraykanka ayaa si weyn uga walaacsan Xarun tababar ciidan oo laga sameeyay maamul goboleedka Puntlan, taas oo durba dafcadii u horaysay ee ciidamadaa laga soo saaray. Kadib markii ay dhamaysteen tababar uga socday mudo dhawr bilood ah goob qarsoodi ah
oo ku taal dhinaca Barri ee Magaalada Boosaaso.
Afhayeenka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mr. P.J. Crowley, ayaa sheegay in Maraykanku ka warqabo hawl galkaas hase ahaatee aanu sinnaba ugu lug lahayn.Wuxuuna sheegay in Maraykanku su’aalo iska weydiinayo cidda taageeraysa iyo ujeedada laga leeyahay mashruucaa oo bilaabay inuu tababaro ciidan military ah oo gaadhaya 1050 askari Puntland gudaheeda.
Wakalada wararka ee Associated Press ayaa xogtaa heshay kadib markii ay sameeyeen xidhiidho dhinaca taleefoonka iyo waraysiyo xaga E-mailka ah oo ay la yeesheen sadex khuburo ah oo ku dhaw goobaha abaabuladu ka socdaan. Khuburadaa ayaa sidoo kale xaqiijiyey inay tababaro ka bilaabmeen Puntland, maamul goboleed ka dhisan Waqooyi Bari, lana aaminsanyahay inay ku jiraan saliid iyo shidaalba.
Pierre Prosper, oo ahaa shaqsi u qaabilsanaa dambiyada dagaalka xiligii madaxwaynihii hore ee Mareekanka ee Bush, ayaa wakalada AP u sheegay in dal Islaam ahi u shaqaalaysiisay inuu lataliye u noqdo dhinaca amniga iyo la-dagaalanka musuqmaasuqa. Mr. Pierre Prosper ayaa ka gaabsaday in uu shaaciyo dalka shaqaalaysiiyey, isagoo intaa ku daray in dhaqaalahani ay ka yimaadeen “sanduuqa zakada”, waajib kamid ah tiirarka Islaamka oo sanad waliba laguto. Isla deeq bixiyahaas ayaa maal galiyey abaabulka kasocda Waqooyi Bari, oo lagu doonayo in lagu dhiso ciidan aad u xoogan.
Dhinaca kale Afhayeenka wasaaradda arrimaha debeda ee maraykanka ayaa warfidiyeenada u sheegay inay la socdaan oo keliya in maamulayaasha Puntland ay qandaraas siiyeen sharikad gaar ah oo xagga ammaanka qaabilsan inay gacan ka siiso la dagaallanka budhcad-badeedda gobolka. Hase ahaatee waxaa uu sheegay inaan iyaga lagala tashan barnaamijkaa. sidaa awgeed aanay iyagu wax maalgelin ah ku sameyn, isla markaana ay ka walaacsan yihiin cidda maalgelinaysa oo aan la garanayn, ujeeddooyinka laga leeyahay iyo baaxadda uu leeyahay intaba.
Wakaaladda wararka ee Maraykanka, AP, waxay shalay ku warrantay in ciidankaa ay maagelinayso dowlad muslim ah oo aan la magacaabin oo soo qortay sarkaal hore uga tirsanaan jiray CIA-da Maraykanka iyo diplomacy sare oo hore uga mid ahaa maamulka Maraykanka inay gacan ka siiyaan abuuritaanka ciidankaa ee laga wado gudaha maamulka Puntland.
Qaybtii ugu horreysay ciidankaa oo ka kooban 150 nin oo Soomaali ah waxay dhammaysteen tababar 13 toddobaad ah maalintii Isniintii. Waxaa uu ciidanku ku qalabeysan yahay 120 gaadhi oo ah nooca pickup-ka iyo Lix Diyaaradood oo ah nooca yar-yar oo xeebaha ilaalinaya.
Bishii September, maamulka Obama waxaa uu sheegay inay qorsheeyeen inay ballaadhiyaan la macaamilka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya iyo sidoo kale jamhuuriyada goonida u taagan ee Somaliland, taas oo qayb ka ah dadaalka Maraykanku ku doonayo soo celinta nabadda Soomaaliya.
Saraakiisha Maraykanku mar kale ayay sheegeen isla Septembar inay si gaara ula macaamilayaan Somaliland. Laakiin waxay sheegeen in aanu gaadhsiisneyn aqoonsi ay u fidiyaan Somaliland, iyagoo ku dooday inay dhinaca amaanka iyo horumarka dhinacayada adeegyada aasaasiga ah kala shaqaynayaan Somaliland oo ay ku amaaneen horumarka dhinaca dumuqraadiyada iyo adeegyada aasaasiga ah.
Jiritaanka ciidanka la sheegay inay sameeyeen maamulka Puntland waxay walaac ku abuurtay xaalada amniga gobolka iyo dalalka daneeya arrimaha geeska ee mandaqada, iyadoo ay jiraan warar mudooyinkii u danbeeyay sheegayay inay Dekedda Magaalada Boosaaso kasoo degayeen Hub tiro badan, kaas oo lagu soo daabulayay dhinaca Beriga, isla markaana dabayaaqadii todobaadkii hore waxa jiray warar sheegayay in markab ka mida shixna Hubka oo kusoo jeeday Dekedda Magaalada Boosaaso ay qabteen ciidamada maraykanka eek u sugan gacanka Cadmeed. Laakiin ma jiraan warar danbe oo sheegaya inay ciidamada maraykanku sii daayeen markabkaa shixnada hubka ah siday iyo in kale.